RASMI: Gerard Pique Oo Xili Ciyaareedka Maca-salaameeyey & Sergi Roberto Oo Bilo Maqnaanaya – Akhriso Warbixinta Barca Soo Saartay – Laacibnet.net
RASMI: Gerard Pique Oo Xili Ciyaareedka Maca-salaameeyey & Sergi Roberto Oo Bilo Maqnaanaya – Akhriso Warbixinta Barca Soo Saartay
Kooxda kubadda cagta Barcelona ayaa warbixin naxdin leh kasoo saartay xaaladda xiddigihii xalay ka dhaawacmay ee Gerard Pique iyo Sergi Roberto, kuwaas oo laga saaray kulankii guul-darradu kasoo gaadhay ee Atletico Madrid ay kusoo garaacday 1-0.
Barcelona ayaa khasaare iyo dhaawacyo ay iskugu darsameen, waxaana xilli ay 30 daqiiqadood ka hadhsanayd ciyaarta laga saaray Pique oo awoodi kari waayey inuu kusii jiro garoonka, Sergi Roberto uu daqiiqadihii ugu dambeeyey ku baxay beddel la’aan.
Laba warbixinood oo kala duwan oo Barcelona ay kasoo kala saartay dhaawacyada labadan ciyaartoy ayay si cad ugu xustay natiijada baadhitaankii lagu sameeyey maanta, kaas oo lagu caddeeyey in Sergi Roberto uu muddo laba bilood ah garoomada ka maqnaan doono, halka dhaawaca Pique uu yahay mid culus oo shan bilood illaa lix bilood inta u dhaxaysa qaadan doona, taas oo ka dhigan in xili ciyaareedka oo dhan uu maqnaan doono.
“Baadhitaanno Axaddan lagu sameeyey Sergio Roberto ayaa waxay muujiyeen kala go’ muruqa lugta midig ah. Waxa uu qiyaas ahaantii garoomada ka maqnaan doonaa muddo laba bilood ah.” Ayaa lagu yidhi warbixin ay Barcelona kasoo saartay Sergi Roberto.
Muddada uu laacibkani maqan yahay, waxa booskan kasii ciyaari doona saxeexa cusub ee Sergino Dest oo fursaddii ugu horreysay ee uu booskiisa ku xoreysto ka helaya Camp Nou.
War-saxaafadeed kale oo ay soo saartay Barcelona ayay ku sheegtay in dhaawac culus oo darajada heerka saddexaad ah uu jilibka ka gaadhay Gerard Pique, waxaana lagu yidhi: “Baadhitaano Axaddan lagu sameeyey Gerard Pique waxay muujiyeen in dhaawac darajada heerkka saddexaad ah uu carjawda jilibka lugta midig ka gaadhay. Xaaladdiisa soo kabashada dhaawacana waa la qiimayn doonaa.”
Dhaawaca Gerard Pique ee aanay Barcelona sida rasmiga ah u sheegin waqtiga uu maqnaanayo ayey dadka aqoonta u leh dhaawacyada noocan ah ay sheegeen in 33 jirkani uu ku maqnaan doono muddo shan illaa lix bilood ah, taas oo ka dhigan in xili ciyaareedka oo dhan uu ka maqnaanayo.
Barcelona ayaa hore muddo afar bilood ah dhaawac loogaga diray da’yarka Ansu Fati oo qalliin jilibka lagaga sameeyey, Sergio Busquets oo xulka qaranka Spain kusoo dhaawacmay kulamadii caalamiga ahaa, Ronald Araujo iyo Samuel Umtiti oo illaa xili ciyaareedkii hore maqnaa.